Group Chat ဖွဲ့ထားတဲ့ Moon Lover သရုပ်ဆောင်တွေ – Korea Celebrities Fans
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က ပြသခဲ့တဲ့ Scarlet Heart : Goyro ဇာတ်လမ်းတွဲဟာလူကြိုက်များ ခဲ့တဲ့ TV Series တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကြားက ဆက်ဆံရေးကတော့ အခုထက်ထိ ခိုင်မြဲနေကြဆဲပါပဲ ။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကန်ဟာနူးက Feb 8 ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ” ဒီဇာတ်လမ်းမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေ အားလုံး ကောင်းကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး နေ့ရော ညရော Chat Room မှာ ပြောကြပါတယ် ။ ဖုန်းကနေ ပြောဖြစ်ကြတာပါ ” လို့ ပြောပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး ●••●
ကျွန်တော်တို့ Member တွေ . ၁၁ ယောက်လုံး Group Chat မှာပြောကြတယ် ၊ Story တွေ Share ကြတယ် ။ ဘေခွန်း နဲ့ လီဂျွန်ကီ တို့က နိုင်ငံခြားကို ခဏခဏ ခရီးထွက်ရတော့ သူတို့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပြကြတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တောင် မနာလို ဖြစ်မိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလေးတွေ တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လို့ပြောပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးတဲ့အထိ သူ့ကို နားလည်ပေးတာ ၊ ကူညီပေးတာတွေလည်းပြောခဲ့ပါတယ် ။
Moon Lover ရိုက်ပြီး ၅ ရက်လောက်နေတော့ ကျွန်တော် Retrial ဆိုတဲ့ ကားလေး ဆက်ရိုက်တယ် ။ အဲဒိကားလေးနဲ့ အလုပ်များနေတော့ အဲဒိနေ့က သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး အတူတူသောက်ပေမယ့် ကျွန်တော် မသွားလိုက်ရဘူး ။ ကျွန်တော့် ဇာတ်ကား VIP Screening ကိုလည်း သူတို့ လာကြည့်သွားပါတယ် ။ အဲဒိအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
이거 아이컨택인가?? #강하늘#재심#욱아..
လီဂျွန်ကီ , IU , ဂျီဆိုး နဲ့ ဇီဟာရာ တို့ဟာ Feb7ရက်နေ့က ဟာနူးရဲ့ VIP Screening ကို လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဟာနူးရဲ့ Retrailer ကားလေးကတော့ January 15 ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။
Previous Previous post: ပရိတ်သတ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို လက်ဖွဲ့ပို့ပေးတဲ့ လီမင်ဟို
Next Next post: 1မိနစ်အတွင်းရောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ Lee Dong Wook Fan Meeting ပွဲလက်မှတ်